करदाताका लागि खुसीको खबर, वैशाखदेखि घरबाटै कर तिर्न सकिने, डिजिटल पेइमेन्ट सुरु हुने !
ARCHIVE, COVER STORY, TAX » करदाताका लागि खुसीको खबर, वैशाखदेखि घरबाटै कर तिर्न सकिने, डिजिटल पेइमेन्ट सुरु हुने !
काठमाडौं - कर तिर्न करदाता सेवा कार्यालयमा लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अव सकिने भएको छ । सरकारले राजश्व प्रशासनबाट दिइने सेवालाई सरल एवम् कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी बैसाखदेखि नै यो प्रणाली लागु हुने भएको हो ।
Tags : ARCHIVE, COVER STORY, TAX